China Backpack T-B3585 Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU yechinyakare dhizaini bhegi
Unyanzvi: Iyi saizi repabhegi rekumashure iri 31 * 19 * 45cm (L * W * H) .Imwe yakazvimiririra gobvu rakapetwa mupanda inokwana palaptop inosvika 15.6 inch. Yakakura imba hombe ine akawanda madiki emukati muhomwe masutu eiyo iPad, zvinyoreso, simba bhengi, mbeva, makiyi, nhare, charger, nezvimwewo 2 mativi emapoketi uye maviri epamberi zipi chikamu chemakii ako, mabhuku, amburera, notibhuku uye zvimwe zvidiki zvidimbu. Homwe papfudzi tambo uye pamusoro ndeye nyore kuwana kune zvinowanzoshandiswa zvinhu. Kugadzira bhegi rako rakarongeka uye usambofa wakachera kuti uwane zvaunoda.
Chinyorwa: Bhizinesi remafashoni bhegi rakagadzirwa nesplashproof & scratch inodzivirira nylon, kuve nechokwadi chekuti inogara yakasimba mamiriro akaomarara uye nyore kuchenesa.Machira asina mvura anochengetedza zvinhu zvako zvakachengeteka kubva pakuputika uye kudonha.
Zvimiro: Kunze kwe USB chiteshi chine yakavakirwa muinosvikika USB tambo dhizaini inoita iyi bhegi reUSB rive nyore kubhadharisa nharembozha yako chero kupi pasina kutora bhenji rako remagetsi.Padded bendekete bhanhire inogadziriswa uye unonzwa kupfava pabendekete kunyangwe kana yakazara zvakazara. Bhandi rakarukwa zvakanaka remikwende rakasungirirwa kune bhegi repombi pane trolley yemukwende wako, zvichiita kuti rwendo rwako uye kufamba kuve nyore.
Chengetedzo: Laptop bhegi rine rakavanzika anti-kuba muhomwe kumashure inodzivirira zvinhu zvako zvakakosha kubva kune mbavha. Dual-layer mana mazino kuputika-chiratidzo zipi yakasimba zvakanyanya uye inogara kwenguva refu kupfuura chiratidzo cheyipisi zipi, iri kunyange nemishonga banga banga, hazvisi nyore kuti zviparadzane kana iwe uchitakura zvinhu zvakawanda muhomwe. Zippers dzinogona kuvharwa nekiyi, saka haufanire kunetseka nekuba. Kufamba pamwe nekuwedzera kuchengetedzeka.
Model Nhamba T-B3585
Ruvara: Dema, Waini, Kofi, Sirivha pfumbu
Saizi: H44cm * L30cm * W16cm
Pashure: Mukwende T-B3516
Zvadaro: Bhegi T-B3599